Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. इन्डोनेसियामा दुर्घटना भएको विमानको दोस्रो ब्ल्याकबक्स फेला – Emountain TV
इन्डोनेसियामा दुर्घटना भएको विमानको दोस्रो ब्ल्याकबक्स फेला
एजेन्सी, १८ कात्तिक । इन्डोनेसियाको सरकारको स्वामीत्वमा रहेको लाइन एयरको जे टी ६ सय १० विमानको दोस्रो ब्ल्याकबक्स आइतबार गोताखोरहरुले फेला पारेका छन । १सय ८९ जनाको मृत्यु भएको सो जहाज दुर्घटनामा १ सय ५ जनाको शव भेटिएको छ ।
जसमध्ये ७ जनाको मात्र पहिचान हुन सकेको छ । हराइरहेका अन्य व्यक्तिहरुको शवको खोजी भइरहेको जनाईएको छ । ब्ल्याकबक्स फेला परेपछि विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य फेला पर्ने विश्वास अधिकारीहरुले गरेका छन् । आंशिक रुपमा क्षति ग्रस्त अवस्थामा फेला परेको उडान डाटा रेकर्डरबाट यथार्थ विवरण आउने जनाइएको छ ।
Posted by Mountain Television on Sunday, November 4, 2018
जाँचमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार एक महिनापछि विमान दुर्घटनाको प्रारम्भीक जाँचको निष्कर्ष आउने छ । विमानको सुरक्षा नियम र समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने विशेषज्ञको दाबी छ ।
सस्तो दरमा हवाइ यात्रु उडाउने विमान कम्पनीहरुले विमानको मर्मत सम्भार र सुरक्षामा ध्यान नदिँदा विमान दुर्घटना बढ्दै गएको एक अनुसन्धान कर्ताको जिकीर छ ।